Iindaba - Yintoni uthotho lwe-3D ebhalwe?
Yintoni i-3D embossed Series?
ILihua WPC I-3D Embossed Decking edibeneyo Iteknoloji entsha imveliso decking, okanye ungabiza embossed nzulu okanye super embossed.The technology iphambili inkqubo nzulu embossed ngexesha production.When extrusion wagqiba, ipatheni yenye umphezulu iibhodi.
Itekhnoloji entsha ye-3D embossing yeWPC kumgangatho wokuhombisa ngaphandle, ukuphucula ukuhombisa. Itekhnoloji ye-3D embossing yindlela ekhohlakeleyo yokwenziwa. Umgangatho ngamnye uyafana nomfanekiso oqingqiweyo, kwaye imeko yobugcisa kunye nenqanaba lokubonakalayo liphuculwe kakhulu. I-Classical 3D embossing luphuculo olukhulu kumgangatho weplastiki obonwayo, ongenakuphinda ukrolwe kuphela ngamabhanti kodwa uxhase umkhondo wesiqalo sokukhonkotha.
I-3D embossing decking decking ifikelela kwi-3 mm, enokuthi ngokucacileyo inyuse amandla e-adsorbent omgangatho. Xa kuthelekiswa nentengiso ye-intanethi yomphezulu we-groove, ulwalathiso lwe-adsorption yommandla we-3D embossing ngaphezulu.
Izinto eziluncedo ze-3D ebhalwe
Imveli ye-wpc edityanisiweyo kulula ukuphulukana nengqolowa ngaphezulu,ukuhonjiswa okuphezulu yenza ngcono kunayo nayiphi na imithi ehlanganisiweyo eqhelekileyo, yeyendalo ngakumbi kwaye inomtsalane, ibuna ngcono kwaye iyakrwela
Ukuhonjiswa okuphezulu kwe-WPC kukaLihua kuzo zonke izibonelelo zokuhonjiswa ngokwesiko, isagcinwa: ukungena manzi, anti-UV, ukumelana nemozulu, anti-umhlwa, ukuthintela izinambuzane, ulondolozo olusezantsi, ubomi benkonzo ende njl. Uziva ngakumbi njengokhuni lwendalo ngenxa yonyango olukhulu lokwenza imibala.
Inkampani yethu inezinto ezininzi ozihambileyo, ezinje ngomthi wenamba kunye neenkuni, ezithandwa kakhulu kwimarike.Umbala ulungelelaniswe, nokuba ungakanani i-oki, ikofu, i-walnut, itshokholethi okanye enye into esinokuyenza inye oyifunayo.
Uhlobo lombala kumzi mveliso weLihua WPC
Kwaye phantse wonke umbala oqhelekileyo esinokubonelela ngawo, ukuba ufuna ukwenza okhethekileyo, ungasithumela isampulu yakho, sinokwenza njengesampulu yakho, oku kuya kukunika kunye nabathengi bakho ukhetho olungakumbi.
WPC decking ngaphandle, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC nokwadala, WPC decking edityanisiweyo, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking umgangatho,